Maraykanka iyo Masar oo ka wada hadlay xiisada wabiga NILE.
By axadle On Jul 21, 2020
Hogamiyaha Maraykanka Donald J Trump iyo dhigiisa Masar oo ku wada hadlay khadka teloofonka ayaa isla soo hadal qaaday muranka Masar iyo Itoobiya ee Wabiga NILE iyo sidoo kale Colaada ka taagan dalka Liibiya.
Labada Hogamiye waxa ay ka wada xaajoodeen Horumarkii ugu dambeeyey ee Wada-xaajoodka Khilaafka Biyo-xireenka Ethiopia, Masar iyo Suudaan sida uu sheegay Afhayeenka Madaxtooyada dalka Masar, Basaam Radi.
Madaxweynayaasha Masar iyo Maraykanka waxaa kaloo ka wada arrinsadeen Xiisadda dalka Libiya, wuxuuna Hogamiye Trump ku baaqay in Xal Siyaasadeed lagu dhameeyo Colaadda dalkaasi.
Wada-hadalka Khadka Telefoonka ee Labadaa Waddan waxa uu ku soo beegmay, iyadoo uu Barlamaanka Masar shalay ansixiyey in Ciiddamo Masaari ah loo diri karo dalka Libiya, si ay taageero u siiyaan Hoggaamiyaha Dagaalka, Marshal Khaliifa Xaftar.
Xukumadda Masar waxay ka mid tahay Dowladaha taageeradda Milliteri iyo Dhaqaale la garab taagan Khaliifa Xaftar oo isaga guluf ugu jira sidii uu Talada ugla wareegi lahaa Xukumadda Midnimada Qaran ee Libiya oo ay QM aqoonsan tahay.
Ciiddanka Xukumadda Libiya oo ay Milliteriga Turkiga taakuleeyaan waxay qorsheynayaan in ay u ruqaansadaan Degaanadda Sirte iyo Jufra oo ay ku yaallaan Ceelasha Shidaalka, iyadoo ay Kooxda Khaliifa Xaftar haatan ku sugan yihiin Deegaanadaasi.